トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Horukon ambany-napetraka endri-javatra, dia jereo ny alalan '-dalana tamin'ny fotoana
Ao amin'ny ordinatera, ary ny varotra napetraka, dia ny efitrano conserver f?fana dia afaka mifehy ny payout. Amin'ny maha-sehatra mba hamaritana ny isan-jaton'ny ny payout, avo-napetraka, toerana afovoany, dia niteny fa ambany toe-javatra ireo. Ao, ny toe-javatra izay mitranga ao amin'ny toerana ambany rehefa te hamantatra mialoha isika dia hijery na misy toy izany ny zavatra toy izany. Low sehatra izy, Dia olona kokoa ny heviny fa betsaka mahita amin'ny alalan'ny mora foana amin'ny toerana avo.
ohatra, tsy tonga ara-dal?na takatry, ary matetika no tsy tonga tonga na dia ao amin'ny fohy miasa ora maro, dia matetika no mora ny hanala ny handrisika Atsurichi, tonga fihetsiketsehana dia fitongilanana azo jerena fotsiny toy izany, koa azo itokisana tampoka ny ambany tonga amin'izany hifandray ny jackpot, dia ho hita hevitra maro mifandray amin'ny takatry vokany. Raha mijery amin'izany fomba izany, ny ambany toerana amin'ny ankapobeny ny tahaka izany avy hatrany mba manana ny heviny fa afaka ho tapa-kevitra ny ampahany mifandray amin'ny famokarana.
Avy eo, ny soritr'aretina izay manaraka fahita indrindra dia, na dia be fahoriana mitarika ny lehibe hira, dia mora mitarika ny namely ambany payout, dia ny hoe misy ihany koa ny toe-javatra ny lahatsoratra-jackpot izay tsy pullback ao amin'ny fohy miasa ora.
Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha avo toe-javatra na kafa toe-javatra, fa dia ny an'ny toe-javatra toy ny baolina izay ninonoanao mitranga manomboka amin'ny ambany toerana, koa tonga ny baolina teny amin'ny manodidina ny voalohany ka ny mifanohitra amin'izany, mba hanomboka tena tsy niditra, dia ny toe-javatra mitranga fa nirenireny manodidina.
zavatra toy izany anefa izany, dia toa marina ny zavatra sasany hitranga, dia tsy misy fepetra satria miankina ihany koa amin'ny fanitsiana ny fantsika sy izay rehetra atao mba hahazoana antoka ny toerana ambany rehefa, ho any amin'ny tany mifanohitra heviny fa tsy afaka ny ho tsara fa ny sasany.